West Indies ilinganise i-series ePietermaritzburg
i-Youth One-Day International Series yemidlalo emihlanu phakathi kwe-Coca-Cola South Africa U19s ne-West Indies U19 izocaca ngomdlalo wokugcina emuva kokuthi izivakashi zinqobe umdlalo wesine ngama-wickets amane ukwenza u-2-2 ePietermaritzburg ngeSonto.
Iqembu lasekhaya, ebelibheke ukuqeda i-series ngomdlalo wesine, bahlulwe ukushaya njengoba baphume bonke ngama-runs angu-207 emuva kokuhlulwa kwi-toss kanye nokucelwa ukuthi bashaye kuqala.
Ovula umdlalo u-Matthew Breetzke uqhubekile ne-form yakhe kulandela ikhulu lakhe kumdlalo odlulile no-55 (83 balls, 7 fours) ePietermaritzburg Oval, lapho ehluleke ukuthola abantu abazomeseka.
Ukapteni u-Raynard van Tonder, wenze ama-runs angu-38 futhi u-Herman Rolfes uhlanganise u-37, kodwa ngathi yilabo kuphela abashaye kangcono, kuhambelana no-20 ka-Fraser Jones (24) no-Jiveshan Pillay (23) abe-South Africa bephume kuma-overs angu-48.2.
u-Nyeem Young uphose kahle wathola u-3/42.
Iqembu lasekhaya lidinge ama-wicket ekuqaleni uma belifuna ukushintsha umdlalo futhi bathola amane, behlisa abaphethe isicoco se-U19 ku-59/4 kuma-overs angu-15.1. Ngemisebenzi ka-Kgaudise Molefe (3/51), u-Jones (1/24) no-Gerald Coetzee (1/27).
Kodwa u-Bhaskar Yadram (65 off 75 balls, 9 fours) no-Alick Athanaze (66 not out, 80 balls, 9 fours, 1 six) bahlanganise u-99 bobabili nge-wicket yesihlanu ukubuyisa izivakashi endleleni.
uMatthew Patrick (28) ulethe ama-runs okugcina ukunqobisa iqembu langaphandle kusele amabhola angu-33.
Umdlalo ozocacisa nge-series use-Chatsworth Oval ngoLwesithathu.
uMahatlane: Okuhle kudlula okubi i-West Indies ilinganisa i-series yama-U19 uPeterson ujabule ngamalungiselelo e-SA U19 Ikhulu lika-Van Tonder iholela i-SA U19 ukunqoba umdlalo wokuqala Ukuguquka kwe-SA U19s kuletha ukunqoba okuthembisayo